Tallaabooyinka AMISOM qaadayso hadii dagaal ka qarxo Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Shirka ay isagu yimaadeen Mas'uuliyiin ka socota dalalka ay Ciidamada ka joogaan Soomaaliya ayaa looga hadlay xaaladda hadda ka taagan Muqdisho.
ADDIS ABABA - Shir aaladda ZOOM-ka ku yeesheen xubnaha Guddiga taliyayaasha militeriga iyo booliska AMISOM Arbacadii ayaa looga hadlay xaaladda ka taagan Muqdisho iyo kaalinta uga aadan Ciidamada Midowga Afrika hadii uu dagaal ka qarxo magaaladda.
Kulanka ayaa waxay Saraakiisha isla garteen in AMISOM marka hore dhex-dhexaad ka noqoto dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya, tan labaadna ay difaacdo saldhigyadeeda hadii xaaladda isku bedesho dagaal u dhaxeeya dowladda iyo Mucaaradka.
AMISOM waxaa kaloo la siiyay amar ah inay Ciidan dhex-dhigto dhinacdyada si looga hortago inay Muqdisho fara ka baxdo, taasoo saameyn karta xaruumahooda iyo dedaalladii ay in ka badan 13 sano soo wadeen, ee nabadeynta dalka.
Waxay Ciidamada AMISOM ilaalin doonaan goobaha muhiimka ah, sida Dekadda, Garoonka diyaaradaha iyo Madaxtooyadda, waxaa kaloo loo xil-saarey sugida amiga gudiga Midowga Africa ee kusoo wajahan Muqdisho si uu dhex-dhexaadiyo dhinacyada iska soo horjeeda.
Shirka Gudiga ayaa yimid kadib markii Midowga Musharixiinta dhawaan ay sheegeen in Fahad Yaasiin uu hub iyo rasaas kasoo qaatay AMISOM, isagoo u adeegsaday dagaalkii Axadii lasoo dhaafay ka dhacay Caasimadda dalka, oo shacab lagu barakiciyay.
Waxay arintaas keentay tuhun ah inay AMISOM la jirto Farmaajo, oo hadii dagaal dhaco isaga ka badbaadin doonto in xilka ay ka tuuraan xoogaga kasoo horjeeda, oo hadda la wareegay xaafado ku dhaw Villa Somalia.
Waan-waan ayaa ka socda Muqdisho, waxaana isha lagu wada hayaa hadalka uu Farmaajo ka jeedin doono Gollaha Shacabka Sabtida, iyadoo la filayo in dib loogu laabto Afisyooni, si doorashadda loo qabto, iyadoo meesha laga saarayo muddo-korarsiga sharci darrada ah.